ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ညီမလေး သဘောပေါက်နိုင်မှာပါ.. ပုရစ်
ညီမလေး သဘောပေါက်နိုင်မှာပါ.. ပုရစ်
အရင်က အမေစုကို အကုန်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်.
အခုကျတော့ အမေစု ကဘာမှမလုပ်နိုင်မှန်း သိသွားပြီတဲ..
သာမန် ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားတဲ့သူအချို့ဟာ..
မီဒီယာအချို့နဲ့ Social မီဒီယာတွေကတက်လာတဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုတွေနောက်ကို
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ထင်ရှားမှုနဲ့ လူအများက
အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကို အသုံးချပြီး အာဏာရှင်အုပ်စုဘက်ကို..
ဒေါ်စုကို ပြည်သူအချို့ စိတ်နာစေဖို့အတွက်..
"လူ့အခွင့်အရေး Vs ဘာသာရေး "စစ်မျက်နှာကို
ဘင်္ဂံလီတွေကို ၀ှိုက်ကဒ်ပေးတာတွေ ၊ လွှတ်တော်ထဲကို
သူရရှိထားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်အဆင့်နဲ့ တရာဥပဒေကော်မတီ
အစိုးရ၀န်ကြီးအဆင့် နဲ့တောင်မှ..လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊အဆောင်အယောင်နဲ့
အဲဒါကြောင့်လဲ သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပွင့်လင်းစွာပြောခဲ့တာပါပဲ..
စကားမျိုးတွင်တွင်သုံးပြီး..နှစ် ၃၀ လောက် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လို့
အကုန်ရောင်းစားသွားတဲ့ သူမျိုးတွေကို ကြိတ်လေးစားနေတဲ့
နိုင်ငံတကာလေးစားမှု ၊ပညာတတ်ဆန်မှု ၊ဇွဲ..၊
အစိုးရစရိတ်နဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ဖြုန်းနေတယ်ထင်ပါသလား...၊
အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ကျမ်းမာရေး ၊ပညာရေးကအစ၊
နေရေးထိုင်ရေးအထိ အမေကျော်ဒွေးတော်လှမ်း ယုံကြည်ခဲ့တဲ့..
ဥပမာ ၁၁ ဘီလျံကိစ္စသာတကယ်ရှိခဲ့ပါက..
.ဒေါ်စု စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဖြစ်ရင် ဘယ်လိုရှင်းမလဲ..
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစတဲ့
ကိုယ့်ခြံထဲက ရွေအိုးတွေကိုလဲ တူးသွားသေးတယ်..၊
ရခိုင်ပြည်နယ်..၊ ကျောက်ဖြူဒေသကြီးကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ..
အဲဒီ စိတ်ကူးယာဉ်အိပ်မက်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်.
သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေ ပျောက်သွားနိုင်မလား..ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေပါပဲ..၊
အဲဒါကြောင့်..ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကို စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့
မျက်မှောက်ခေတ် မတိုးတက်တဲ့ နှစ် ၅၀ အတွင်းမှာ..
ကမ္ဘာ့တိုးတက်တဲ့ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံတွေက..သူ့ဆီလာမှာဖြစ်ပါတယ်
Photo- Than Htut